Olana amin'ny fizahan-tany: Mandidy tena, anton-javatra ivelany sa izy roa?
Home » Lahatsoratra farany farany » Tourism » Olana amin'ny fizahan-tany: Mandidy tena, anton-javatra ivelany sa izy roa?
Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Vaovao • Seychelles Madagascar Malgache • Tourism • Travel Wire News • Vaovao isan-karazany
Izay rehetra azo kitihina araka ny asehon'ny sary dia tsy misy ifandraisany amin'ny fizahantany. Fa Seychelles, zava-dehibe ny fizahan-tany satria ny fizahan-tany no andrin'ny toekarem-pirenena ankehitriny.
Na izany aza, ny fizahantany dia miovaova hatrany amin'ny maha-indostria azy. Izy io dia miraikitra amin'ny fitoniana noho ny fahombiazany mitohy. Ny hery ivelany dia mety hanakorontana ny fizahan-tany amin'ny fotoana rehetra, ary ity dia zavatra kely vitan'ny tanjona seychelles. Ny firenena nosy ihany koa dia mora tohin'ny hetsika eo an-toerana sy ny governemanta. Eto dia ny vidin'ny asa, ny fiarovana sy ny filaminana, ny fahadiovana ary ny sandam-bola dia tonga hatrany amin'ny resaka lehibe.
Ny hery ivelany dia ahitana ny vidin'ny vidin-tsolika, ary ankehitriny dia mbola hiasa ahiahy ihany. Mampiseho mazava tsara azy ny vaovao maraina: maraina: «Mahazo tombony ny menaka. Niakatra 10% mahery i Brent taorian'ny a fanafihana drôna voarindra no niantraika tamin'ny indostrian'ny solika Saudi Arabia manery ny fanjakana hanapaka ny vokarin'ny solika ho antsasany. Ity no fandrosoana lehibe indrindra eto Brent. ” Mety hanomboka hisy fiatraikany amin'ny vidin'ny dia izany, ary ny toerana lavitra fizahan-tany no ho voalohany mahatsapa ny vokany.
Ny fitokonana toy ny nataon'ny British Airways izay vao nofoanana fotsiny ny sidina, na ny toetr'andro tahaka ny nitranga tany Espana andro vitsy lasa izay dia hetsika na antony mitazona ny mety ho mpandeha an-trano ihany.
Ny hery ivelany azontsika rehetra atao kely fotsiny dia kely fotsiny, fa ny fanamby napetraky ny eo an-toerana dia azo antoka fa ny fandraisana andraikitra nataon'ny mpandray anjara amin'ny fizahan-tany mba hanerena ny governemanta handre ny antso nataon'ny sehatra tsy miankina mba hanala ireo sakana ary hamela ny dia sy ny fizahantany hiasa.